WARWICK သည်တက္ကသိုလ်၏စိန်ခေါ်မှုနောက်ဆုံးအဆင့်သို့တက်သည် - သတင်း
Warwick တက္ကသိုလ်စိန်ခေါ်မှုနောက်ဆုံးမှတဆင့်နေသောခေါင်းစဉ်: ဒီမှာ 10 tweets အတွက်သူတို့ရဲ့ခရီးပါပဲ
Warwick တက္ကသိုလ်အသင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင်လန်ဒန် Imperial ကောလိပ်နှင့်ဆုံတွေ့ရမည့် Semi-Final Round ဖြင့်ပြီးဆုံးသည်။
Richard Pollard၊ George Braid၊ Owain Burrell နှင့် Andrew Rout ကဖွဲ့စည်းထားသည့် Warwick အဖွဲ့သည်ဘီဘီစီ ၂ ရက်နေ့ည ၈ နာရီခွဲတွင်မက်ဒလင်းကောလိပ်ကင်းဘရစ်ကိုတနင်္လာနေ့တွင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
University Challenge သည်ဗြိတိန်ရုပ်မြင်သံကြား၌အကျော်ကြားဆုံးသောပဟေcompetိပြိုင်ပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် Warwick အဖွဲ့သည် ၅ ကြိမ်လုံးကိုကျော်ဖြတ်ကာအောင်မြင်မှုတစ်ခုစီရရှိခဲ့သည်။ Warwick တက္ကသိုလ်သည် University Challenge ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရခဲ့သောနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရစ်ချတ်ပိုလာကဒီအတွေ့အကြုံအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ သူက Warwick Tab ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ရုပ်မြင်သံကြား၌ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းသည်တက္ကသိုလ်၏စိန်ခေါ်မှုအတွက်ခဏတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်။
သူကမျှဝေလိုက်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ကြောင်း Warwick အသင်း၏ဒုတိယအကျော့ပြိုင်ပွဲတွင်အမြဲတမ်းထွက်သွားလေ့ရှိသည့် Warwick တွင်ပဟေcircိဆန်သောပြက်လုံးတစ်စုံတစ်ခုရှိနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူက၎င်းသည်အလွန်ကြီးသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဉာဏ်စမ်းဉာဏ်စမ်းပဟေingိများပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံနှင့်၎င်းရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်ပင်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ နောက်ကျအွန်လိုင်း။
အသင်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှတ်ချက်ပေးရာတွင်သူသည်အဖွဲ့သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မည်သူကမည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့ပြောင်းလဲသွားမည်၊ မည်သည်ကိုရွေးချယ်ရမည်၊ မည်သည်ကိုရွေးချယ်ရမည်၊
နောက်ဆုံး Warwick ရဲ့ခရီးပေါ်တက် Catching
ခိုင်မာသောအစ: အဝေးမှပင်လန်ဒန် Imperial ကောလိပ်နှင့် Warwick တက္ကသိုလ်များသည် University Challenge ပရိသတ်များအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။
Wow Imperial Kohn soooo ချွန်ထက်!
၎င်းသည်နောက်ဆုံး၌ Kohn v Rout (Warwick) ဖြစ်မည်လော။ #UniversityChallenge pic.twitter.com/RK3mlK0CFW
- ဇန်နဝါရီ (@ janh1) ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2021
အဆိုပါဆီမီးဖိုင်နယ်သည်တင်းမာနေသည်။ များစွာသောသူတို့သည် Imperial College London နှင့် Warwick အသင်းများသည်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးတွင်သူတို့၏အထင်ကြီးလောက်သောဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အတူနောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုထင်ကြသည်။ သို့သော် Warwick အသင်းသည်ထိပ်ဆုံးမှ ဦး ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဗိုလ်လုပွဲကို Warwick v Imperial ဖြစ်ဖို့နှစ်သက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ semifinal rematch ပြန်ကောင်းဖို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအသင်းနှစ်ခုစလုံးကိုထပ်မံမြင်ကွင်းပေါ်ပြန်ကြည့်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။ #UniversityChallenge pic.twitter.com/DlAOUGTWFq
- ❅ Angela Pands များ (@avalANJ) မတ်လ 22, 2021
အကယ်၍ သင် Warwick uni ယောက်ျားလေးများကိုတက္ကသိုလ်စိန်ခေါ်မှုကိုမအောင်စေချင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဟာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
- Guy Kingsley-Smith (@gkingsleysmith) မတ်လ 22, 2021
တက္ကသိုလ်စိန်ခေါ်မှု၏တစ်ခုမှာ? Warwick အဖွဲ့သည် University Challenge ပရိတ်သတ်များကြားတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များခဲ့ပြီး၊ သူတို့ဆက်လက်အောင်မြင်နေစဉ်တွင်အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသည်ရေပုံးဝန်များကိုသွန်းလောင်းလျှက်ရှိသည်။
ကိုယ့် meme ထွက် ဦး ခေါင်းအကြောင်းပေါ့
ဤအရာသည်အလုပ်မလုပ်ပါက Warwick အဖွဲ့သည် boyband ဖွဲ့စည်းသင့်သည် #UniversityChallenge
- ဒန်ရော့စ် (@IAmDRoss) မတ်လ 22, 2021
Warwick ကို UCAS ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ယူခဲ့သူတွေတောင် Warwick ကိုဝိုင်းကနေအားပေးနေကြတယ်
ကျစ်, လမ်းကြောင်း - မယုံနိုင်လောက်အောင်။ Warwick ကိုတကယ်အားပေးတယ်၊ ငါသူတို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ ကကျွန်တော့်ကို UCAS ရွေးချယ်မှုတွေထဲကတစ်ခုအနေနဲ့ယူခဲ့ရင်ရေတွက်မှာလား။ #UniversityChallenge
- SarahJ2020 (@ J2020Sarah) မတ်လ 22, 2021
လေယာဉ်ပြေးလမ်းအတွက်အဆင်သင့်: ငါတို့အဖွဲ့ရဲ့ funky ဇာထိုး jumpers ကျနော်တို့အပြောင်းအလဲများကိုအတွက်အကောင်းဆုံးအရသာရှိသည် Warwick မှာကဒီမှာကမ္ဘာကြီးကိုအသိပေးခြင်း, ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်လျှောက်လုံးတွစ်တာ၏ဟောပြောချက်ခဲ့ကြသည်။
ငါ Warwick ရဲ့အံ့သြဖွယ် Jumper ရွေးချယ်ရေးသူတို့ကိုဤတစ်ဝက်ဗိုလ်လုပွဲအနိုင်ရထင်ပါတယ် #UniversityChallenge
- Craig Hughes * (@BadgerousII) မတ်လ 22, 2021
ဖိအားအောက်မှာအမှားနည်းနည်း- အသင်းခေါင်းဆောင် Andrew Rout ကလန်ဒန် Imperial ကောလိပ်ဆန့်ကျင်ပြိုင်ပွဲတွင်အသင်းဖော် Owain Burrell ၏နာမည်ကိုမေ့သွားသည်။ သို့သျောလညျး, ကြှနျုပျတို့လူအများစုဖိအား၏ပမာဏကိုအောက်မှာသူတို့ရဲ့မိခင်ရဲ့နာမတျောကိုမေ့လျော့မယ်လို့သေချာပါတယ်ဒါကြောင့်တစ် ဦး ခွင့်လွှတ်ပြစ်မှုပါပဲ။
#UniversityChallenge Warwick မတိုင်မီတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီလော မင်းရဲ့နာမည်က🤣🤣
- lornaokay (@lornaokay) မတ်လ 22, 2021
Warwick MA ကျောင်းသား Owain ကိုလည်းဂုဏ်ပြုပါသည်။
သူ့နာမည်ကဘာလဲ 🤣 #UniversityChallenge https://t.co/RqynhzfyEt
- Warwick Postgrad Hub (@WarwickPgHub) မတ်လ 23, 2021
ကျွန်ုပ်သည် Warwick တက္ကသိုလ်၏စိန်ခေါ်မှုအသင်းအတွက်ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်
- anna g (@anna_grantham) မတ်လ 29, 2021
ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ ဦး ဆောင်နေတဲ့ပရိသတ်အများစုက Warwick ဟာဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်မှာအောင်ပွဲခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပုံရတယ်။
Warwick ကကျွန်တော့်သူရဲကောင်း Router အားလုံးကိုရှစ်ယောက်လုံးကစားစေအောင်သူတို့အားလုံးကိုဖြုတ်ပစ်ပါ #rollonthefinal #UniversityChallenge
- မဟာမိတ် (@FluffyPickle) မတ်လ 29, 2021
Aprilပြီ ၅ ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ တနင်္လာနေ့ညနေ ၈း၃၀ တွင်ထုတ်လွှင့်မည့်နောက်ဆုံးသို့ညှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မစောင့်နိုင်ပါ BBC Two ။
ဘီဘီစီ / အိုင်တီဗွီစတူဒီယိုများ၊ ဂျိုးဇက်စကန်လွန်မှပုံရိပ်။
• Warwick သည်ဘာသာရပ် ၁၆ ခုအတွက်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ၁၀၀ တွင်အဆင့်ရှိသည်
၈/၂ (၂ + ၂) ကဘာလဲ။
• Warwick သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထိပ်တန်းဗြိတိန်တက္ကသိုလ် ၁၀ ခုအဖြစ်အဆင့် ၂ ခု၌ရပ်တည်ခဲ့သည်
Warwick သည် Creative Writing အတွက်တတိယအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်